Apple dia hanampy fiampitana lalamby amin'ny Maps ofisialy | Vaovao IPhone
Mazava ho azy fa ny fampiharana Apple Maps dia tsy ny ankafizin'ny mpampiasa. Izy io dia iray amin'ny lafiny ilan'ny fifaninanana ny mofomamy, ary ny Google Maps dia manana fampahalalana amin'ny an-tsipiriany sy eo noho eo misy atiny maro, noho izany, ho an'ny maro dia io no safidy voalohany. Na izany aza, mbola misy ireo mampiasa ny Maps satria mahafeno ny filany ary satria nihatsara be tao anatin'ny volana vitsivitsy. Ary hitohy izany, ny orinasa Cupertino dia nanamafy fa miasa amin'ny fampidirana fiampitana lalamby ao amin'ny Apple Maps. Fomba iray hafa hitomboana hatrany amin'ny fivezivezena sy ny fanaovana sarintany avy amin'i Apple.
Ny zava-drehetra dia nipoitra taorian'ny resabe nateraky ny Google Maps, ary ny fampiroboroboana ny Google dia nanoro mpamily kamiao handeha hamaky lalana manokana, izay mety tsy noheverin'ny Google Maps fa tsy fiara fa kamio, ary tafahitsoka teo amin'ny lalamby any California. Na izany aza, nanam-potoana handosirana ilay fiara ilay kamio, Tsy izany no nitranga ho an'ny mpamily fiaran-dalamby izay maty vokatr'izany ary nandratra olona 32 hafa izay nandeha an-tsambo ilay faritra voadona.
Ary amin'ny mpitsidika toy ny Google Maps na Apple Maps, ny fiampitana lalamby dia tsy voamarika matetika, toy ny tsy misy azy ireo amin'ny toerana ara-batana sasany any Etazonia. Izany no mahatonga ny mpamily hiampita amin'ny fotoana maharatsy ary miteraka lozam-pifamoivoizana. Tsy fantatray raha hampiditra ny sarintany Google sy Apple amin'ny sarintaniny ihany koa ny fampahalalana momba ny akaiky ny fiaran-dalamby mankany amin'ny fiampitana na hampiditra fampahalalana tsara sy sary momba ny sakana tsy maintsy resena fotsiny izy ireo, fa ny fepetra rehetra manatsara mendrika ny fiarovana ny lalana. Mandritra izany fotoana izany, ny angona fifamoivoizana amin'ny Apple Maps dia ho tonga any UK, tanàna toa an'i Bristol, Cardiff ary Glasgow.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Hanisy fiampitana lalamby amin'ny Maps ofisialy i Apple